Su'aalaha la Weydiiyo - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Nooc noocee ah ayuu soosaaraa KingHow?
Waxaan haynaa liis dhammaystiran oo ah alaabooyinka aan soo saarno, laakiin waxaan ugu horreyntii ku jirnaa boorsada. Boorsada, Boorsada Duffel, Bacda jimicsiga, Boorsada qalabka, Bac qabow iwm Waxaan sidoo kale u dhoofineynaa qaar ka mid ah alaabada ku xiran macaamiisheena sida teendhada Kaamka, Bacda Jiifka, Sariirta Kaamamka, Koofiyadaha / Koofiyadaha, Dallada iyo waxyaabo kale oo badan.
Dhar noocee ah iyo summad nooc ah ayuu KingHow la shaqeeyaa?
Polyester, Nylon, Canvas, Oxford, Ripstop nylon-caabbinta biyaha, maqaarka PU waa dharka noogu caansan. Lagu calaamadeeyay daabacaad iyo daabac daabac leh ayaa la heli karaa. KingHow waxay leedahay waayo-aragnimo badan oo soo-saarista shixnad kasta oo loo baahan yahay si loo tolo alaabtaada. Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah oo maadooyin ah oo aan adiga kuu heli karno.
Waa maxay waqtiga hogaaminta caadiga ah ee muunad ama amar?
Badanaa, muunad qaadistu waxay u baahan doontaa 7-10 maalmood. Waqtiga hogaaminta caadiga ah ee shay caadadiisu tahay waa 4-6 toddobaad iyadoo kuxiran shuruudaha tolida, tirada, iyo helitaanka alaabta ceeriin. Xaaladaha amarrada degdegga ah, waan kula shaqeyn doonnaa sida ugu wanaagsan ee aan awoodno si aan ula kulano shuruudaha taariikhda markabkaaga.
KingHow ma u qaabeeyaa ama u horumariyaa alaabada macaamiisha?
Dhab ahaan, ma naqshadeyno oo uma horumarinno wax soo saar cusub macaamiisha. Laakiin waxaan ka caawin doonnaa macaamiisheenna inay shaqadan qabtaan, iyadoo waayo-aragnimadeena aan ku siin karno soo-jeedin ku saabsan wax soo saarka oo aan ka caawin karno helitaanka xalalka si loo helo go'aanka ugu fiican.
KingHow ma bixisaa shaybaarro?
Muunad bilaash ah sida caadiga ah, laakiin haddii aad sameyso shey adag ama aad ubaahantahay caaryo furan, waa in lacag lagaa qaado si loo daboolo qiimaha qaabka hormarinta, qaabeynta caaryada iyo soo iibinta qalabka. Markii amar la bixiyo, khidmadda muunadda ayaa laga goynayaa qaddarka dalabka, iyo muunad-soo-saar hore ayaa had iyo jeer loo bixiyaa saxiixa ka hor inta aan wax soo saarku bilaabmin.
Ma jirtaa tirada ugu yar ee dalbashada?
Wixii alaab ah oo la sameeyay ama amar daabacan, tirada ugu yar ee amarku waa 100 gogo 'ama $ 500. Waxaan isku dayeynaa inaan macaamiisha meel dhigno markasta oo ay suurta gal tahay. Si kastaba ha noqotee, haddii waxsoosaarkeena aan loo dhisin si uu u waafajiyo badeecadaada si hufan, waxaan u baahan karnaa tiro intaa ka badan si loo daboolo kharashka dejinta.
KingHow ma siiyaa dhammaan alaabta ceeriin ee looga baahan yahay in shay laga sameeyo?
KingHow waa mid aad u jilicsan iibsiga alaabta ceeriin ee alaabtaada. Iyada oo loo marayo shabakadeena alaab-qeybiyeyaasha, waxaan ka heli karnaa kaliya wax kasta oo qiimo jaban ku kacaya. Dhanka kale, haddii macaamilku rabo inuu na siiyo agabkan, waan ku faraxsanahay inaan meel dhigno. Qalab gaar ah ama waxyaabo kale oo adag in la helo, waan kula shaqeyn doonaa si loo go'aamiyo istiraatiijiyadda soo iibsiga ugu fiican.
Waa maxay muddada bixinta ee KingHow u baahan tahay?
KingHow wuxuu ka codsanayaa tixraacyada amaahda dhammaan macaamiisha cusub wuxuuna sameeyaa hubinta amaahda kahor intaan shaqada la bilaabin amarkooda koowaad. Waxaan badanaaba codsanaa inaad bixiso 30-50% amarkaaga koowaad. Kahor rarka amarka, KingHow wuxuu kuu soo diri doonaa qaansheeg dheelitir ah. Dib-u-habeyn, waxaan ku sameyn karnaa 30% dhigista iyo 70% dheelitir ka dhan ah nuqulka B / L.